Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || गोसाइँकुण्ड : यात्रा एक अनुभूति अनेक – kayakairan.com
गोसाइँकुण्ड : यात्रा एक अनुभूति अनेक
म यात्रा रुचाउँछु किनकि यात्राका अनुभूतिले मलाई तङ्ग्र्याउँछ, उठ्न सिकाउँछ, अझ भनौं बाँच्न सिकाउँछ । असरल्ल व्यावहारिक जीवनमा एउटा लय भरिदिन्छ यात्राले । हुनत जीवन नै एउटा सुखद् यात्रा हो । जीवन यात्राले मानिसलाई धेरै कुरा सिकाएको हुन्छ । जीवनमा उकाली र ओरालीहरू आइरहन्छन् र गइरहन्छन् । एक मानिसका जीवनमा उकाली मात्र पनि आइरहँदैन र ओराली मात्र पनि कसैका जीवनमा स्थायी रहन्न । जीवन यात्राका उकालीमा मात्तिने र ओरालीदेखि आत्तिनेहरूले गन्तव्य नाप्न सक्दैनन् । यसैले जीवन यात्राको एउटा नियम छ–सुख र दुःखमा समभावको उपयोग ।
जीवन यात्राको जटिल दर्शनमा पस्नु मेरो उद्देश्य होइन । म त्यतातिर जान्न पनि । मेरो उद्देश्य यात्राको अनुभूतिको साझेदारी गर्नु हो । एउटा धार्मिक स्थलको यात्रा जहाँ म एक वर्ष अगाडि गएको थिएँ । त्यसैको संक्षिप्त वृत्तान्त पस्कँदै छु यहाँ । यात्रा धार्मिक स्थलको हो तर उद्देश्यमा त्यो धार्मिक यात्रा थिएन । हुनत यात्रामा धार्मिक कृत्य पनि गरियो जो धर्मका अनुयायीले गर्छन् । यात्रा पाँच दिनको थियो र यात्रीहरू थियौं– म र सहकर्मी मित्र अम्बिकाप्रसाद दुलाल । यात्रा हो– गोसाइँकुण्डको ।
अम्बिकाप्रसाद दुलाल एक व्यावहारिक मान्छे हुनुहुन्छ मेरा विचारमा । उमेरका हिसाबले दाइ, स्वभावका हिसाबले एकदम स्पष्टवक्ता, पेशागत हिसाबले प्राध्यायक र बसाइका हिसाबले मेरा छिमेकी हुनुहुन्छ उहाँ । हामी प्राध्यापन गर्छौ एकसाथ विगत २४ वर्षदेखि शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा । शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा अवस्थित छ । यो नेपालकै पुरानो सामुदायिक क्याम्पस हो ।
एक दिन प्रस्ताव ल्याउनु भो यात्राको अम्बिका दाइले । यात्री दुई जना मात्र । गन्तव्य कति दुरुह छ त्यो कुरामा न उहाँ जानकार हुनुहुन्थ्यो न म नै विज्ञता राख्थें तर योजना बन्यो । हामी दुई निस्कियौं ।
हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा चितवनदेखि धुन्चेसम्मको रह्यो । बाटामा ३ बस फेरिए । चितवनबाट गल्छी, गल्छीबाट ढुङ्गे र ढुङ्गेबाट धुन्चे । जिल्लाका हिसाबले हामीले चितवन, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा छोयौं । रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे । म यस अघि त्रिशुलीसम्म पनि पुगेको थिइन रसुवाको कुरै छोडौं ।
रसुवा तामाङ वाहुल्य जिल्ला रहेछ । रसुवादेखि बाहेक तामाङहरू मकवानपुर, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुलीमा उल्लेख्य मात्रामा छन् । भोटबर्मेली परिवारभित्र पर्ने तामाङ भाषा नै तामाङ जातिको भाषा हो । जाति र भाषाभाषीको संख्यालाई हेर्दा नेपालमा तामाङहरू जति छन् त्यो भन्दा कम जनसंख्या तामाङ भाषाभाषीको रहेको छ । तामाङहरूले आफ्नो मातृभाषा बोल्न छाडेर नेपाली भाषातिर आकर्षित भएकाले जातिको जनसंख्याभन्दा भाषाभाषीको जनसंख्या कम भएको हुनुपर्छ । यस्तै तामाङहरू बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् । तामाङहरूले बौद्ध धर्म र परम्पराअनुसार गुम्बा, माने र छ्योर्तेनमा पूजाआजा गर्छन् । उनीहरूको आफ्नै किसिमको संस्कार छ । जस्तै नामकरण, नाककान छेड्ने, भातख्वाई, छेवार, गुन्युचोलो दिने, विवाह, मृत्यु संस्कार आदि । तामाङ समाजमा कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्न ताम्बा, बोन्बो र लामाको आवश्यकता पर्छ । नामकरणदेखि मृत्युसंस्कारसम्म लामाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तामाङ जातिमा ।
म रसुवा र तामाङ जातिको कुरा अलि बढी गर्दैछु किनकि हाम्रो गन्तव्यस्थल गोसाइँकुण्ड रसुवामै पर्छ । १५४४ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको एक विकट पहाडी जिल्ला रसुवालाई हावापानीका हिसाबले मोटामोटी रूपमा टुन्ट्राप्रदेशीय, शीतप्रदेशीय र समशीतोष्ण प्रदेशीय गरी विभाजन गर्न सकिन्छ । यस जिल्लाको उच्च हिमाली भेगमा हिउँ जमिरहन्छ, मध्यपहाडी भेगमा चिसो हावापानी छ । मध्यपहाडी भेगमा हिउँदमा हिमपात पनि हुने गर्छ भने यस जिल्लाको तल्लो भेगमा समशीतोष्ण हावापानी भेटिन्छ । जलसम्पदाका हिसावले यो सम्पन्न छ । त्रिशुली, चिलिमे, मैलुङ, भोटेकोशी, लाङटाङ, फलाँखु जस्ता नदी तथा खोलाहरू र गोसाइँकुण्ड, पार्वतीकुण्ड, भैरवकुण्ड, सरस्वतीकुण्ड, गणेशकुण्ड, दुधकुण्ड, जोगेश्वरकुण्ड, तातोपानी आदि जलाधार क्षेत्र हुन् रसुवाका ।
यात्राको पहिलो बिसौंनी धुन्चे पुगेपछि माथि जाने यात्रीहरू कोही छन् कि भनी खोज्न थाल्यौं । दशहरा कटिसकेको थियो हामी पुग्दा । तर जनैपूर्णिमा आउन निकै दिन बाँकी थिए । यो यात्री हिंड्ने सिजन होइन रहेछ । तीन जना भेट्यौं नुवाकोटतिरका । बूढाबूढी थिए । ती पनि एकादशीको सन्दर्भ पारेर आएका रहेछन् । हामीलाई केही राहत भयो । एकै होटलमा बस्यौं हामी सबैजना । धुन्चेको राम्रो होटलमा गनिंदो रहेछ त्यो होटल । होटेल मालिक घिमिरे थरका रहेछन् । उनले त्यो होटल भाडामा लगाएका रहेछन् । संयोगवश त्यसै दिन होटल मालिक पनि भेटिए । चितवनमा उनका दाजुभाइ पनि रहेछन् । अम्बिका दाइले चिन्नु हुँदोरहेछ उनका चितवनका आफन्तलाई । २०७२ को भूकम्प अधिसम्म आफैं चलाउँथे रे । तर भूकम्प पछि त्यहाँ बस्न छाडेछन् ।
भोलिपल्ट सखारैमा हिंड्ने तय भयो । बिहानै पसल नखुल्ला भनेर हामीले अघिल्लै दिन एक एक वटा हरिया बर्सादी किन्यौं । हावा तेज चल्ने भएकाले छाताको काम आउँदो रहेनछ त्यहाँ । सुन्यौं– माथि लेक लाग्छ, लेक लाग्दा वाकवाक लागेजस्तो हुन्छ, लसुन र अदुवाले लेक लाग्नबाट केही हदसम्म बचाउँछ । लेक लागिहाल्यो भने त्यसको कुनै औषधी छैन । औषधी भनेकै जतिसक्दो छिटो तल ओराल्नु हो । हामीले केही टुक्रा अदुवा र लसुनका पोटी खल्तीमा हाल्यौं । अहिले नाम बिर्सिएँ मैले हामीले लेक लाग्नबाट जोगिनका लागि एक एक चक्की औषधी पनि खाएका थियौं ।
भोलिपल्ट सखारै यात्रा सुरु भयो हाम्रो । तेर्सो बाटो करीव दुई किलोमिटर जति हिंडेपछि घट्टे खोला पुग्यौं । घट्टे खोलाको मुहान भनेको त्रिशुलधारा र गोसाइँकुण्ड नै हो । घट्टे खोलामा अजङ्गको उकालो उक्लिएर गोसाइँकुण्डसम्म पुग्न नसक्नेका लागि एउटा सानो मानवनिर्मित कुण्ड रहेछ । त्यहींबाट चढाइ सुरु भयो । यात्रापथको अनभिज्ञता पनि यात्राको साथी हुँदो रहेछ । हामीले अडकल लगायौं– ठाडै उकालो माथिसम्म त छैन होला, तेर्सो र तर्पायाँ बाटो पक्कै फेला पर्नेछ । हामी तेर्सो र सजिलो बाटो फेला पारिने कल्पनामा नाकठोक्ने उकालो उक्लिरह्यौं । हामी तराईमा बस्छौं । उकालाको अभ्यस्तता टुटेको छ । सायद नाकठोक्ने उकालाको सिलसिला निकै लामो छ भन्ने ज्ञान हुँदो हो त यो यात्राको योजना बन्थ्यो या बन्दैनथ्यो म प्रष्ट छैन ।
देउरालीमा पुग्दा एउटा बन्द होटल देखियो । चिसो पानीसँग बिस्कुट टोक्दै पेटको सामान्य पूजा गरेपछि हामी दिम्सा पुग्यौं । दिम्सामा पहिले आर्मी पोस्ट रहेछ । २०७२ को भूकम्पपछि त्यो दिम्सा पोस्ट त्यहाँबाट माथि चन्दनबारी सरेको थाहा पाइयो । दिम्साको पुरानो आर्मी पोस्ट रहेको स्थानमा एउटा शिलापत्र भेटियो जहाँ रसुवा जिल्लाका मुख्य स्थानहरूका उचाइ मीटर र फिट दुबैमा लेखिएको पाइयो । मैले यो जानकारीलाई फोटोमा बन्दी बनाएँ । शिलापत्रको जानकारी यस्तो थियो– वेत्रावती– ६२० मिटर (२०३४ फीट), कालिकास्थान– १४०० मिटर (४५९२ फीट), धुन्चे– १९६५ मिटर (६४४५ फिट), घट्टे खोला– १९७७ मिटर (६४६१ फिट), देउराली– २६२५ मिटर (८६१० फिट), दिम्सा पोस्ट– ३०३८ मिटर (९९६५ फिट), चन्दनबारी– ३२५० मिटर (१०२३४ फिट), चोलाङपाटी– ३१०० मिटर (१०१६० फिट), लौरी विनायक– ३२७७ मिटर (११४६३ फिट), गोसाइँकुण्ड– ४३८० मिटर (१४३६६ फिट), स्याप्रुबेसी– १४६० मिटर (४७८८ फिट), रसुवागढी– १८१४ मिटर (५९४९ फिट), सामडाँडा– ३६०० मिटर (११८०८ फिट) ।
दिम्साको पुरानो आर्मी पोस्टबाट अलिकति उक्लिएपछि एउटा होटल देखियो । त्यो होटलको नाम दिम्सा रहेछ । हामीले लख काट्यौं कि दिम्सा ठाउँको नामबाट दिम्सा पोस्ट र त्यसैका आधारमा होटलको नाम दिम्सा रहेको हुनुपर्छ तर यसबारे हामीले कसैसँग सोधेनौं । ११ बजिसकेछ । स्थानीय यात्रुका लागि २ घण्टा जतिमा पुगिने दिम्सा पुग्न हामीलाई पाँच घण्टा लाग्यो । बिहानी खाना त्यहीं खायौं । दुई घण्टा जति आराम गरेर फेरी सुरु ग¥यौं उकालाको यात्रा ।
यात्रामा सहरबजारका कोलाहल थिएन । सुनसान थियो । मूल बाटोसँग जोडिएका उपबाटाहरू थिएनन् त्यहाँ । खच्चर र चौंरीका घाँटीमा झुण्ड्याइएका घण्टीका आवाजले नीरवता चिथ्र्यो । यात्रीहरू खासै भेटिएनन् भन्दा हुन्छ । एकाध जोडीहरू भने बाटामा भेटिए । हामीले उकालामा एकजना भारतीय साधु भेट्यौं खाली खुट्टामा । चिसो छेक्ने कपडा थिएन । एउटा झोली बोकेका थिए । मलाई लाग्यो– यी ज्यान पाल्नका पीरले मागी खान पल्किएका जोगी पक्कै होइनन् ।
दिम्सामा खाना खाए पछि हामी तातेताते गर्दै चन्दनबारी पुग्यौं । त्यहाँ चिज उत्पादन केन्द्र रहेछ । त्यस्ता चिज उत्पादन केन्द्रहरू धुन्चे, चन्दनबारी, लाङटाङ तथा पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको गत्लाङमा रहेछन् । सुनिएअनुसार रसुवामा वार्षिक करीब ३६ हजार किलो चिज उत्पादन हुन्छ र यसको खपत स्थानीय बजारमा केही भए पनि बाँकी संस्थानमा लगिंदो रहेछ । वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म चिज उत्पादन हुने कुरा पनि थाहा पायौं हामीले ।
अत्यासलाग्दो तराइको गर्मीबाट पहाडी जिल्लामा पुगेका हामीलाई त्यहाँ चन्दनबारीले चिसो ए.सी. चलायो । कति विविधता छ नेपालको प्रकृतिमा । १०÷२० किलोमिटरकै फरकमा हावापानी पूरै बदलिन्छ त्यहाँ । मेरा विचारमा नेपाल भूस्वर्ग हो । हामीलाई प्रकृतिले त दिएको छ तर हामीले प्रकृतिप्रदत्त स्वर्गीय आनन्दको उपभोग गर्न जानेनौं । हाम्रो भूस्वर्गलाई आम्दानीको मूल स्रोत बनाउन जानेनौं । नभएका कुराहरूको प्राप्तिका खातिर अन्यत्रै दौडिरह्यौं हामी । हुन नसकेका कुराहरूको दोष अर्काप्रति पन्छाएर हिलोमाथिको ओभानो बनिरह्यौं । हामीले हीरा चिनेनौं र पित्तललाई सुन ठानेर मृगतृष्णामा भौंतारिरह्यौं ।
चन्दनबारीबाट चोलाङपाटीसम्म तेर्सो बाटो छ भन्ने जानकारीले नाकठोक्ने उकालो उक्लिएका हामीलाई ठूलो राहत भयो । समय थियो । चोलाङपाटी पुग्न दुई घण्टा लाग्ने जानकारीले हामी हौसियौं । घना जंगल छ । घना जंगल छिचोलेर उज्यालो पस्न पनि डराउँदो रहेछ त्यहाँ । हामी दुई जना मात्र छौं । बाटो चिप्लो छ । सिमसिम सिमसिम पानी बर्संदो छ । एकदम उराठलाग्दो वातावरण । मोबाइलले टावर नपाएको निकै तलबाट हो । यो एकान्तमा मोवाइलले टावर पाएको भए केही राहत हुन्थ्यो होला । जंगली जनावरको त्रास त छँदै छ । मलाई लाग्यो– यो एक्लैदुक्लै हिड्ने यात्रा नभई कम्तीमा ५÷६ जनाको समूह बनाएर हिंड्नुपर्ने यात्रा रहेछ ।
घट्टे खोलाबाट हिंड्न थालेको ११ घण्टापछि हामी चोलाङपाटी पुग्यौं । उकालो चढ्ने अभ्यस्तता टुटेका हामी कसरी ११ घण्टा लगातार उक्लिरह्यौं होला, कुन शक्तिले हामीलाई हिंडायो होला । म त्यो यात्राको विकटता आज पनि संझिरहेछु । हो, हामी विकल्परहित विकल्पमा थियौं । चोलाङपाटी पुग्दा हामी निकै थाकेका थियौं । हामीले एक एक बटुको गार्लिकको तातो झोल पियौं– एक बटुकोको १५० तिरेर । त्यो ठाउँमा एक बटुको तातो झोल पिउन पाउनुलाई हामीले पैसासँग तुलना गर्न सकेनौं । होटल मालिकले सुनाए– हिउँदमा त्यहाँ एक मिटरसम्म हिउँ थुप्रिन्छ । जब चिसो सुरु हुन्छ उनीहरू तल फाँट झर्दा रहेछन् । हिउँ पग्लिएर सकिएपछि मात्र फेरी उक्लिंदा रहेछन् उनीहरू त्यहाँ । मैले कल्पना गरें– कष्टदायी जिन्दगीको तर उनीहरूमा कुनै कष्टको आभाषसम्म पनि थिएन । एउटा मिठो जीवन पद्धति ठान्थे उनीहरू त्यसलाई । एउटा लय, एउटा निरन्तरता, एउटा बगाइ र एउटा अनवरत क्रमिकता ।
भोलिपल्ट बिहानैदेखि पानी परिरह्यो । एकछिन आकाश चियाएर बस्यौं । रोकिने कुनै छाँट देखिएन । होटेल मालिकले सुनाए– अब यहाँबाट मुख्य चढाइ सुरु हुन्छ । हामी दुबैले प्रत्यक्षमा आत्तिएको देखाएनौं तर मलाई लाग्छ– हामी भित्रभित्रै आत्तिएका थियौं किनकि हिजो हिंडिएको बाटो मुख्य चढाइ थिएन ।
पानी बर्सिने क्रम सिमसिममा परिणतमा भएपछि हरिया बर्सादी ओढेर चोलाङपाटीलाई फेरी भेट्ने वाचाका साथ हामी उक्लियौं । हिजोको बाटो र आजको बाटामा नितान्त फरक छ । जिन्दगीका बाटाहरू पनि यस्तै हुन्छन् । हरेक दिन नयाँ नयाँ बाटाहरू आइपर्छन् जिन्दगीको यात्रामा । सोचिएकै डोरेटोमा जिन्दगीको यात्रा कहाँ तन्किन्छ र ?
लेक लाग्ने सम्भावना लौरी विनायकको उकालामा धेरै हुनसक्छ भन्ने सुनिएको थियो । माथि नै भनिहालें हामी दुई मात्र छौं यात्रामा । फाट्टफुट्ट एकाध मानिसहरू भेटिन्छन् । विकटता झन् झन् चर्किंदो छ । मोवाइलले टावर प्रायः भेट्दैन । हिंड्दै जाँदा एउटा कुइनेटामा टावर भेटियो । हामी दुबैले घरमा खबर ग¥यौं । त्यसका अतिरिक्त कतै टावर भेटिएन । मैले सोचें– हामी दुईमध्ये कुनैलाई लेक लागिहाल्यो भने …… तर हामी भाग्यमानी थियौं त्यस्तो अवस्था आएन ।
लौरी विनायकको उकालो चढ्दै जाँदा ठूला रुखहरू भेटिएनन् । होचा बुट्यानहरू थिए । त्यहाँ पाखैभरि बिखालु फूल फुल्छन् रे तर हामी पुग्दा फूलहरू फुल्ने मौसम थिएन सायद । यसैले फूलका बिखालु गन्धले हामीलाई लठ्याएन । लौरी विनायकको उकालाबाट थाप्लामा पुग्न त्यति धेरै दूरी थिएन । नजिकै देखिन्थ्यो डाँडा तर त्यहाँसम्मको दूरी तय गर्न निकै सकस खेप्यौं हामीले । क्रमशः बुट्यानहरू पनि होचिंदै गए । अन्ततः काला ढुङ्गाहरूका डाँडामा हामी पुग्यौं । हामी बुद्ध डाँडाको थाप्लामा थियौं । त्यहाँ यत्रतत्र ढुङ्गाहरूका थुप्राहरू देख्यौं– ती तामाङहरूका चिहान थिए ।
बुद्ध डाँडाको थाप्लोमा पुगेर तल नियाल्यौं । हुस्सुको गुब्बारा माथि माथि उक्ंिलदैै थियो । एकै छिनमा घाम, एकै छिनमा पानी र एकै छिनमा हुस्सुको गुब्बारा स्पर्श । अलौकिक र अवर्णनीय थियो । हिमालले सेता दन्तलहर देखाएर मुस्काएको दृश्यले हामी मुग्ध भयौं, यात्राका थकाइ हामीबाट गायब भइसकेको थियो ।
अब उकालाको यात्रा टुङ्गिएको थियो । बाटामा भेटिएका एकाध यात्रीबाट थाहा भयो– कुण्डको दूरी बढीमा आधाघण्टा मात्रै छ । बाटो तेर्सो छ तर तेर्सो बाटामा पनि पाइला सर्न गाह्रो मानिरहेछ । झरनाले सुसेली हालेर म यहीं छु को सङ्केत गरिरहेछ । हिउँले चाटेका ठूला ठूला काला ढुङ्गाका पहाड देखिएका छन् । बाटो साँघुरो छ । तल निकै डरलाग्दो छ । केहीबेरको हिंडाइपछि बाटा तल हामीले दुई ससाना कुण्ड देख्यौं । पर थुम्कामा एउटा कटेरो पनि देखियो तर हाम्रो गन्तव्यविन्दु देखिएन । जब हामी कटोरोसम्म पुग्यौं तब एउटा मनमोहक तालले हामीलाई फैलिएर स्वागत गरिसकेको थियो । हामी निर्मल गोसाइँकुण्डको किनारमा थियौं ।
घाम, पानी र हुस्सुको गुब्बाराले लुकामारी खेलिरह्यो । हामीले नुहायौं । पानी निकै चिसो थियो । धर्मात्माले शिवजी देख्छ रे कुण्डमा तर मैले देखिन । दुलाल दाइले पनि देख्नुभएन । हुनसक्छ, कसैले शिवजी देख्दैनन् त्यहाँ तर अधर्मी भइन्छ भन्ने त्रासमा कुण्डका बीचबाट निकाकार शिवजीको स्वरूप प्रकट हुन्छ एकाएक मानिसहरूका मनोबिम्बमा ।
गोसाइँकुण्डको उत्पत्ति कथा हिन्दु धर्मशास्त्रमा शिवजीसँग जोडिएको छ । यो हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल हो । नेपालमा हिन्दु र बौद्धका यस्ता साझा तीर्थहरू मनग्गे छन् । हिन्दु र बौद्ध बीचको धार्मिक सहिष्णुता शताब्दीयौंदेखिको हो नेपालमा । हिन्दुधर्मावलम्बीहरूले यस कुण्डलाई शिवकुण्ड पनि भन्दा रहेछन् । हिन्दुहरू गङ्गा दशहरा र जनैपूर्णिमाका दिन कुण्डमा स्नानका लागि यात्रा गर्दा रहेछन् भने तामाङहरू जनैपूर्णिमाका दिन । गोसाइँकुण्ड नेपाली भाषामा राखिएको नाम रहेछ । तामाङ भाषीहरूले यसलाई कार्पु छोकर भन्दा रहेछन् । कुण्डको नजिक रहेको सूचनास्तम्भमा लेखिएअनुसार गोसाइँकुण्डको सतहको क्षेत्रफल १३.८० हेक्टर, लम्बाइ ६२५.५५ मिटर, चौडाइ ३०२ मिटर र पानीको आयतन १४,७२,००० घनमिटर रहेको जानकारी दिइएको छ । १०० प्रजातिभन्दा बढी फूल फुल्ने वनस्पति, विष, पदमचाल, जटामसी आदि पाइने यस भेगमा चखेवा, चखेवी, खोयाहाँस, कालीजुरे जस्ता पन्छीहरू पाइने रहेछ । यो क्षेत्रलाई २०६४ असोज ६ गते रामसारमा सूचीकृत गरिएको जानकारी पनि पायौं । रामसार क्षेत्र भन्नाले सिमसार तथा पक्षीको संरक्षित सम्पदा क्षेत्र मानिन्छ । नेपालमा गोसाइँकुण्ड क्षेत्रसहित ९ वटा स्थानलाई रामसार क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको छ । रामसारमा यस क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्नुको उद्देश्य दुर्लभ, संकटाभिमुख र संकटापन्न जीवजन्तुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु नै हो ।
पाइएसम्मका जानकारी मानसपटलमा पोको पारेर र वरपरका दृश्यावलोकनमा रमाउँदै हामी फर्कियौं । तेस्रो दिनको बसाइ चन्दनबारी रह्यो भने चौथो दिन हामी त्रिशुली झ¥यौ । पाँचौं दिन पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट दरवार हेर्ने तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै परिस्थितिले हामीलाई साथ दिएन र एउटा आकाङ्क्षा मनभित्रै थाती राखेर हामी पुनः चितवन फर्कियौ त्यसैदिन ।